June dombo rekuzvarwa alexandrite & moonstone. Nyowani yekuvandudza 2021
pera, alexandrite uye moonstone ndiwo matombo ekuberekwa aChikumi zvinoenderana neyese yekare uye yazvino zvinyorwa zveJune dombo bwe. Dombo rakakosha reJune dombo rekuzvarwa mhete kana chishongo chomuhuro.
Zvinorevei kuti dombo rekuzvarwa raJune?
Dombo rekuzvarwa idombo rinosanganiswa nemwedzi wekuzvarwa waJune: pera, alexandrite uye moonstone. Dombo rakakosha raJune dombo rekuzvarwa mhete kana chishongo
Chii chinonzi raJune dombo rekuzvarwa?
Dombo rekuzvarwa raJune rinowanikwa kupi?
Chii chinonzi June chekuzvarwa mabwe?
Ndekupi kwekuwana June dombo rekuzvarwa?
Ndezvipi zviratidzo zveZodhiac zveJune matombo ekuberekwa?
A pera chinhu chakaoma, chinopenya chinogadzirwa mukati meminyama yakapfava yemollusk mhenyu kana imwe mhuka. Kungofanana nehombodo yemollusk, a pera Inoumbwa necalcium carbonate muminiti kristaro fomu, iyo yakaiswa mumatunhu akanyatsoita. Izvo zvakanaka pera yakatenderera zvakakwana uye yakatsetseka, asi mamwe akawanda maumbirwo, anozivikanwa semaparera ebaroque, anogona kuitika. Iyo yakanakisa mhando yemaparera echisikirwo ave achikosheswa kwazvo sematombo anokosha uye zvinhu zvekunaka kwemazana emakore mazhinji. Nekuda kweizvi, pera rava fananidzo yechinhu chisingawanzo, chakanaka, chinoyemurika uye chakakosha.
The alexandrite dzakasiyana-siyana dzinoratidza shanduko yemuvara zvinoenderana nemhando yemwenje. Alexandrite mhedzisiro kubva kudiki diki kutsiva kwealuminium ne chromium ions mune yekristaro dhizaini, iyo inokonzeresa kupinza kwakanyanya kwechiedza pamusoro penzvimbo yakatetepa yewavelengths munzvimbo yeyero yenzvimbo inoonekwa yechiedza. Nekuti chiratidzo chevanhu chinonyanya kutarisana nemwenje wegirini uye hushoma kune mwenje mutsvuku, alexandrite inoratidzika kunge yakasvibira masikati machena apo iyo yakazara yakazara mwenje unoonekwa uripo, uye yakatsvuka mune incandescent mwenje iyo inoburitsa shoma yakasvibira uye yebhuruu spectrum.
Moonstone isodium potassium aluminium silicate yeboka re feldspar rinoratidza pearly uye opalescent schiller. It yakashandiswa muzvishongo kwemireniyoni, kusanganisira budiriro dzekare. VaRoma vakayemura moonstone, sezvo ivo vaitenda kuti yakatorwa kubva kumaranzi akasimbiswa eMwedzi. Vese vaRoma nemaGiriki vakabatana moonstone navamwari vavo vemwedzi. Mune imwe nhoroondo yazvino, dombo remwedzi rakave rakakurumbira panguva yeArt Nouveau.
Matombo ekuberekwa aJune anotangira pane opalescent pera kune mukaka moonstone kune zvisingawanzoitika, kuchinja-ruvara alexandrite. Nemhando iyi yemitengo yemitengo uye sarudzo dzemavara, vanhu vane mazuva ekuzvarwa aJune vanogona kusarudza dombo rakajeka raJune kuti vakwanise chero manzwiro kana bhajeti.
Mazhinji emaparera emvura yakachena anobva kuChina. Gungwa guru pera mapurazi ari muJapan, Thailand, Indonesia, Philippines nePolynesia.
Iwo ekutanga anozivikanwa madhipatimendi ealexandrite anga ari muRussia. Izvo zvakawanikwa zvakare muSri Lanka, Brazil, Tanzania, Mozambique, Madagascar uye munguva pfupi yapfuura muIndia.
Sri Lanka ndiyo inonyanya kukosha sosi yemhando yepamusoro yemwedzi. Moonstone inogadzirwa zvakare muhuwandu hwakakura muBrazil, Myanmar neIndia. Mari diki inowanikwa mune dzimwe nyika zhinji pasi rese.
Zvishongo zvekuzvarwa zvakagadzirwa ne pera, alexandrite uye moonstone. Isu tinotengesa June mabwe ekuberekwa zvishongo mhete, zvishongo, mhete, mitsipa nezvimwe.
Pane zvakanaka pera, alexandrite uye moonstone iri kutengeswa muchitoro chedu
pera mucherechedzo wekukwana uye kusaora. Icho mucherechedzo wehupenyu hwakareba uye kubereka, uye nekuda kwekujeka kwaro kunowanzoonekwa sechiratidzo chemwedzi. Kuvigwa mukati meyster shell, pera inomiririra zivo yakavanzwa, uye ndeyechikadzi zvikuru.
Alexandrite June ibwe rinounza rombo rakanaka, rombo rakanaka uye rudo. MuRussia, inofungidzirwa kuve ibwe rematombo aJune rezvakanaka kwazvo. Zvinotendwa kuti zvinounza mwero mukudyidzana pakati penyika inoonekwa uye neasingaonekwe mweya, kana nyika yepasi.
Chiteshi tariro, kunzwisisika, uye kuwanda nekupfeka moonstone. Yakabatana nekorona chakra uye nesimba revakadzi rechikadzi, iri dombo rinokosha rinofungidzirwa kukurudzira intuition uye kugona kwepfungwa.
Gemini neCancer mabwe ese ari maviri ibwe raJune.
Chero zvauri Gemini neCancer. pera, alexandrite uye moonstone ndiro ibwe kubva munaJune 1 kusvika 30.
June 1 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 2 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 3 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 4 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 5 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 6 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 7 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 8 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 9 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 10 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 11 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 12 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 13 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 14 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 15 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 16 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 17 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 18 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 19 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 20 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 21 Gemini pera, alexandrite uye moonstone
June 22 kenza pera, alexandrite uye moonstone
June 23 kenza pera, alexandrite uye moonstone
June 24 kenza pera, alexandrite uye moonstone
June 25 kenza pera, alexandrite uye moonstone
June 26 kenza pera, alexandrite uye moonstone
June 27 kenza pera, alexandrite uye moonstone
June 28 kenza pera, alexandrite uye moonstone
June 29 kenza pera, alexandrite uye moonstone
June 30 kenza pera, alexandrite uye moonstone
Natural Natural June dombo rekuzvarwa riri kutengeswa mune yedu gem shopu
Isu tinogadzira chishongo chakaitwa munaJune mabwe ekuberekwa semhete dzekubatanidzwa, mitsipa, mhete dzemhete, zvishongo, zvishongo… ndapota taura nesu for quote.